Senate-Ka Maraykanka Ah Oo Ku Taliyay In Cunaqabatayn Lagu Soo Rogo Sacuudiga – somalilandtoday.com
Senate-Ka Maraykanka Ah Oo Ku Taliyay In Cunaqabatayn Lagu Soo Rogo Sacuudiga
(SLT-Washington)-Labo iyo laabatan xubnood oo ka mid ah aqalka senate-ka ee dalka Maraykanka ayaa Madaxweyne Trump u diray qoraal ay ku dalbanayaan in la bilaabo baadhitaan rasmi ah oo ku aaddan saxafigii Sucuudiga u dhashay ee la waayey iyo suurta galnimada ah cunaqabatayn la saaro Sucuudiga.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionMadaxweyne Trump ayaa weriyasha u sheegay in Mr Khashoggi arrintiisa uu ka la hadlay saraakisha Sacuudiga gaar ahaan kuwa ugu sareeya.
Aqalka cad ayaa sheegay in xoghayaha arrimaha dibedda ee Maraykanka Mike Pompeo u khadka talefoonka kula hadlay dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Mohammed Bin Salman isagoo xog dheraad ah ka weydiyay xaalada dhabta ah.
Mar sii horeysay arbacaddii saxaafadda Turkiga ayaa daabacay sawirada kameroooyinka qarsan ee CCTV oo muujinaya cadeyn ah qorshaha Mr Khashoggi lagu waayay.
Sawirada kamerooyinka ayaa muujinaya saraakil looga shaki sanyahay mukhaabaradka Sacuudiga oo soo galaya sidoo kalena ka baxaya Turkiga iyago isticmaalaya gegida diyaaradaha ee Istanbul.
Baarayasha Turkiga ayaa hadda ku howlan baaritaanka laba diyaaradood oo laga leeyahay dalka Sacuudiga oo caga dhigtay garoonka Istanbul 2dii bishan Oktobar. Fidiyoowga kaamerada ayaa muujinaya diyaarad garoonka ku sugan oo dad sugayso,
Lahaanshaha sawirkaAFP/GETTY IMAGESImage captionxaaska Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz
Gabadhaas oo la socotay markii uu qunsuliyadda tagayey ayaan loo ogolaan in ay gudaha u gasho. Sida uu nidaamku yahay, Khashoggi waxaa laga qaaday telefoonkiisa gacanta – arrintaasoo qayb ka ah nidaam caadi ah oo la maro marka la galayo qunsuliyadaha iyo safaaradaha.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in baaritaan ay ku sameyn doonta qunsuliyadda Istanbul halka wasaaradda arrimaha dibedda ee boqortooyadda Sucuudi Carabiya ay sheegtay in dalkeeda ay diyaar u tahay wada shaqeyn iyo in baaritaanka dhismaha uu ka bilaabmi karo.